DAAWO VIDEO:- Madaxweyne Farmaajo oo farriin culus u diray maamulka Somaliland – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DAAWO VIDEO:- Madaxweyne Farmaajo oo farriin culus u diray maamulka Somaliland
Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa habeenkii xalay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabad 26-ka June oo lagu xusaayay 57 guuradii kasoo wareegatay maalintii ay gobolada waqooyi ee Soomaaliya xurnimadda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inay maalintaas ay muhiimad aad u weyn ugu fadhido shacabka Soomaaliyeed, isla-markaana loo baahan yahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo midnimada iyo soomaalinimada.
“Sanadkaan 57 guuradii ee 26-kii June waxay kusoo beegantay anigoo ah madaxweynihii qaranka, waxaa haatan nalaga rabaa inaan dib u xusuusano dabaal-degyadii la qabtay doorashadeedii aan ku guuleystay, kadibne ay isugu soo baxeen dhalinyaro aad u badan, waayeelo, rag iyo dumarba isugu jira, kuwaas oo gobol kasta oo Soomaaliyeed isugu soo baxay, waxay taasi aheyd fariin uu hankeeda aad u weyn yahay, saldhigeeduna uu ahaa nabad, nolol, midnimo iyo cadaalad.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in ka dowlad ahaan uu xil ka saaran yahay in midnimada la raadinayay muddo 58 sano ka hor, ay haaatan u diyaarsan yihiin inay markale cusbooneysiiyan, islamarkaana ay dhisaan qaluubta shacabka Soomaalida ee haatan u muuqata mid kala jeeda.
“Taariikhdeena dhaw qeybteeda xanuunka iyo foolxumada leh ayaa waxay tahay inaan ka gudubno, si aan u gaarno mustaqbal ka wanaagsan kan maanta aanu ku suganahay, marka munaasabadaan waxay tahay mid aad iyo aad noogu weyn ama ugu weyn taariiqdeena soo jireenka ah, waxaana dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay jooggaan ugu hambalyeeynayaa 57 guurada kasoo wareegatay maalintii calanka Soomaaliyeed oo xur ah laga taagay dhul Soomaaliyeed” Ayuu madaxweyne Farmaajo hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay.